(src)="1.1"> Mundo : Un día en la Tierra el 10.10.10
(trg)="2.2"> ထိုနေ့တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လူများသည်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြမည်ဖြစ်ပြီး ၊
(src)="2.1"> Hoy es el día del proyecto Un Día en la Tierra , un día en el que la gente de todo el planeta grabará videos durante el día , los enviarán y pasaránaser parte de un documental y una experiencia que representa una instantánea de la humanidad .
(trg)="2.4"> ပြီးလျှင်လူသားမျိုးနွယ်၏ လျှပ်တစ်ပြက်ဘဝကို ကိုယ်စားပြုသော သတင်းကားတိုနှင့် အတွေ့အကြုံ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာပေလိမ့် မည်။
(src)="3.1"> Gente de todo el mundo se ha registrado para ser parte de esta experiencia , y muchos han creado o se han unidoauno de los 495 grupos y comunidades que han surgido en tornoala ocasión : desde personasapunto de ser padres ,abodas , profesores y grupos alrededor de un país o ubicación específicas .
(trg)="3.1"> ယင်းအတွေ့အကြုံ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ရန်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ လူအများစုက မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည်။
(trg)="3.2"> ထို့အပြင်မိဘလောင်းလျာများ ၊
(src)="3.2"> Aunque más de 10,000 personas ya se han registrado , todavía hay países con baja representación para el acontecimiento , y los organizadores han publicado un pedido en voz alta para que cualquiera se una o inviteaotros que viven en algunos de los países para que se unan y sean parte de la experiencia .
(trg)="3.10"> ဤအဖြစ်အပျက်အတွက်ပါဝင်သူနည်းနေသေးသော နိုင်ငံအချို့လည်း ရှိနေသေးသည်။
(trg)="3.11"> ထို့ကြောင့် စီစဉ်သူများက အတွေ့အကြုံ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဤနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူတစ်ယောက်ယောက်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရန်သို့မဟုတ်ထိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပေးရန်နှိုးဆော်ထားသည်။
(trg)="4.1"> ထိုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန်ယခုအထိ မှတ်ပုံတင်နိုင်သေးသည်၊
(src)="9.1"> Todavía hay tiempo para registrarse y unirse al acontecimiento , y Matt Lambert del blog Motionographer resume muy bien los resultados :
(trg)="4.2"> ထို့ပြင်မိုးရှင်းဂရပ်ဖာ ဘလော့ဂ်မှ မတ်လမ်းဘာ့တ်က ရလဒ်များကို ကောင်းစွာ ပေါင်းပေးခဲ့သည်။
(src)="9.2"> Los resultados de este proyecto serán un largometraje en un archivo compartido de video — que los participantes podrán descargar para uso no comercial con propósitos creativos y educativos— , y una comunidad de cineastaseinspirados ciudadanos dedicadosaexplorar nuestra identidad global en una ocasión compartidaatravés de los medios .
(trg)="5.1"> ဒီ စီမံကိန်းရဲ့ရလဒ်က အကုန်လုံးမျှဝေနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ ။
(trg)="5.2"> ပါထားတဲ့သူတွေက ဖန်တီးရေးနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တာမပါဘဲ သုံးနိုင်မယ့် ဒေါင်းလုပ်ချခွင့် ရှိတဲ့သတင်းကာတို ၊
(src)="9.3"> Sin embargo , de acuerdo con el siguiente video , para poder accederaeste tesoro de conocimiento , necesitarás colgar un video de un minuto durante el 10.10.10 .
(trg)="5.3"> ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အသိုင်းအဝန်းနဲ့ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘုံဖြစ်ရပ်ရဲ့အသိအအမှတ်ပြုတာကို လိုချင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်း အထူးရုပ်ရှင်ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါလိမ့် မယ်။
(src)="9.4"> ¡ Así que no pierdas la oportunidad !
(trg)="7.1"> ကမ္ဘာမြေရဲ့ရက်တစ်ရက်ဆိုတာ ဘာလဲ
(src)="1.1"> Sudeste de Asia : Blogueando sobre fútbol
(trg)="1.1"> အရှေ့တောင်​ အာ ​ ရှ ၊
(src)="3.1"> Foto de la página de Flickr de Nhy Nguyen usada con licencia CC Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
(trg)="1.2"> ဘော ​ လုံး ​ ပွဲ ​ အကြောင်း ဘ ​ လော့​ ဂ်​ ရေးသား ​ ခြင်း
(src)="4.1"> Hay muchos blogs de fútbol en el Sudeste de Asia que brindan noticias relevantes y actualizaciones sobre partidos de de fútbol y programas en la región .
(trg)="2.1"> ဒေသ တွင်း ဘောလုံးပွဲများနှင့် အစီအစဉ်များ ၏ သတင်းများနှင့် သင့် တော်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးနေသော ဘောလုံးဘလော့ဂ်များစွာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းတွင်ရှိနေပါသည်။
(src)="4.2"> A través del correo electrónico , entrevistéaErick Bui de Vietnam Football yaChamroeun de Cambodia Football Roubroum sobre bloguear de fútbol en el sudeste asiático .
(trg)="2.3"> ဗီယက်နမ်ဘောလုံးမှ အဲရစ်ဘွေ့နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ်ရွန်တို့အား အရှေ့တောင်အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
(src)="5.1"> Erick da una breve historia del fútbol en Vietnam :
(trg)="3.1"> အဲရစ်ခ်က ဗီယက်နမ်ဘောလုံးသမိုင်းအကျဉ်းကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
(src)="6.1"> El fútbol es indiscutiblemente el principal deporte y el que recibe mayor apoyo en Vietnam .
(trg)="4.1"> ဘော လုံးက ဗီယက်နမ်မှာ အာပေးမှုအရဆုံးအားကစားဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး ။
(src)="6.2"> Su competencia anual Liga V-tiene lugar desde 1980.
(trg)="4.2"> ဗီလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၈ဝကတည်းက နှစ်တိုင်းလုပ်ခဲ့တာလေ ။
(src)="7.1"> Cuando Vietnam fue dividida en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur , existían dos selecciones nacionales ...
(trg)="5.1"> ဗီယက်နမ်ကို မြောက်ဗီယက်နမ်နဲ့တောင်ဗီယက်နမ်ဆိုပြီးခွဲလိုက်တုန်းက နိုင်ငံအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်သွားတယ်… ၁၉၇၅မှာ ပြန်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့၊
(src)="7.2"> Luego de la unificación de Vietnam en 1975 , el fútbol vietnamita sufrió un largo periodo de estancamiento .
(trg)="5.2"> ဗီယက်နမ်ဘောလုံးက အကြာကြီး တုံ့နှေးသွားတယ်။
(src)="7.3"> En 1991 , la selección nacional de fútbol de Vietnam jugó su primer partido internacional .
(trg)="5.3"> ၁၉၉၁မှာတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအသင်းက ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာပွဲကို ကစားခဲ့ပါတယ်။
(src)="7.4"> Desde entonces , el fútbol vietnamita ha mejorado mucho .
(trg)="6.3"> ဗီလိဂ်ရောက အခု အာဆီယံဒေသတွင်းက အကောင်းဆုံးတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။
(src)="7.5"> Ahora , tanto la selección de Vietnam como la Liga V son unos de los mejores en la región de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático .
(trg)="8.1"> ဗီယက်နမ်ဘောလုံးအကြောင်းကိုရေးသော သူ ၏ အင်္ ဂလိပ်ဘလော့ဂ်ကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ဖြစ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာကို အဲရစ်ကပြောပြသည်။
(src)="7.6"> Erick nombra su motivación por mantener un blog en inglés sobre fútbol en Vietnam :
(trg)="9.1"> ဗီယက်နမ်လိုရေးတဲ့ဘောလုံးဆိုက်တွေအများကြီး ရှိတာမှန်ပေမဲ့လည်း ၊
(src)="7.7"> Al contrario de la gran cantidad de sitios de fútbol en vietnamita , hay pocos sitios en inglés sobre fútbol en la red .
(trg)="9.2"> ပြည်တွင်းဘောလုံးအကြောင်းရေးတဲ့အင်္ ဂလိပ်စာမျက်နှာတွေကတော့တော်တော်နည်းပါတယ်။
(src)="7.8"> Esa es la razón por la que inicié el blog de fútbol de Vietnam para ayudaraque las personas sepan más de fútbol en mi país .
(trg)="9.3"> ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးအကြောင်းကို တခြားလူတွေ သိစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗီယက်နမ်ဘောလုံးဘလော့ဂ်ကို စတင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲ ။
(src)="7.9"> Tengo muchos amigos en el extranjero que también son hinchas de fútbol .
(trg)="9.4"> ကျွန်တော့် မှာ ဘောလုံးချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားသူငယ်ချင်း တော်တော်များများရှိပါတယ်။
(src)="7.10"> A menudo me preguntan sobre fútbol vietnamita porque se les hace bastante difícil encontrar información .
(trg)="9.5"> သူတို့က ကျွန်တော့် ကို ဗီယက်နမ်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲမေးခွန်းထုတ်တယ်၊
(src)="7.11"> Viendo este asunto , pienso que un blog en inglés sobre fútbol puede ser un vínculo esencial entre Vietnam y el mundo .
(trg)="9.7"> ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့် ပြီးတော့ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်သွယ်ပေးဖို့အင်္ ဂလိပ်လို ဘောလုံးစာမျက်နှာလိုတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
(src)="7.12"> Tengo la pasión y algo de conocimiento de fútbol , así que realmente disfruto blogueando sobre fútbol vietnamita .
(trg)="9.8"> ကျွန်တော့် မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လုံလောက်တဲ့ဘောလုံးဗဟုသုတရှိတယ်ဆိုတော့ဗီယက်နမ်ဘောလုံးအကြောင်း ဘလော့ဂ်ရေးရတာ တကယ်ပျော်ပါတယ်။
(src)="7.13"> Chamroeun es el primer blogger de fútbol camboyano .
(trg)="11.1"> ချွမ်ရွန်သည်ကမ္ဘောဒီးယား ၏ ပထမဆုံး ဘောလုံးအကြောင်း ဘလော့ဂ်ရေးသူဖြစ်သည်။
(src)="7.14"> A través de su blog , Cambodia Football Roubroum , comparte información sobre partidos de fútbol en Camboya :
(trg)="11.2"> Cambodia Football Roubroum ဆိုသော သူ့ဘလော့ဂ်မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘောဒီးယားရှိ ဘောလုံးပွဲများအကြောင်း မျှဝေလေ့ရှိသည်။
(src)="8.1"> Inicié mi blog personal en julio de 2008.
(trg)="12.2"> ဇူလိုင်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘလော့ဂ်ကို စခဲ့တာ ။
(src)="8.2"> Mi principal objetivo es difundir las noticias sobre fútbol camboyano .
(trg)="12.3"> ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားဘောလုံးသတင်းတွေ ဖြန့် ဝေဖို့ပါပဲ ။
(src)="8.3"> He notado que nuestros dos países vecinos , Tailandia y Vietnam , tienen mejores programas de fútbol .
(trg)="13.1"> ကျွန်တော်သတိပြုမိတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်မှာ ဘောလုံးအစီအစဉ်တွေက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာပဲ ။
(src)="8.4"> A los jugadores se les paga bien .
(trg)="13.4"> အများစုက အလကား ဒါမှမဟုတ်လစာနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲ ကစားနေကြတာ ။
(src)="8.5"> Pero en Camboya , los futbolistas no están verdaderamente en buenas condiciones .
(trg)="13.5"> ဒါပေမဲ့လွန်ခဲတဲ့ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအခြအနေက တော်တော်လေး ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။
(src)="8.6"> La mayoría de ellos juega gratis o con remuneraciones muy bajas .
(trg)="13.6"> ခုဆိုရင်ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ကြေးစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိနေပြီလေ ။
(src)="8.7"> Sin embargo , nuestro fútbol ha cambiado mucho en los últimos cinco años .
(trg)="15.6"> org တို့ဖြစ်ပြီး ယင်းဘလော့ဂ်များသည်အခြားပြည်တွင်းစာမျက်နှာများနှင့် လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။
(src)="8.8"> Ahora tenemos una liga profesional que está auspiciada por una empresa vietnamita .
(trg)="16.1"> မလေးရှားမှ Foul အား ထိန်းသိမ်းသော ဟားရက်ရှ်ဒီအိုလ်ကမူ ပြီးခဲ့သောလများက မလေးရှားတွင်အရေးပါသောအကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည့် အားကစားအလောင်းအစားအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
(src)="8.9"> Erick y Chamroeun también enlazanaotros blogs de fútbol de la región .
(trg)="17.1"> ပါ တီတော်တော်များများက အားကစားလောင်းကြေးထပ်တာကို တရားဝင်လုပ်မယ့် ကိစ္စကို ဆန့် ကျင်ခဲ့ကြတယ်။
(src)="8.11"> Estos blogs también enlazan con sitios web locales de fútbol .
(trg)="17.2"> လောင်းကစားဆိုတာ လူများစုအတွက်ဖြစ်ဖြစ်လူနည်းစုအတွက်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းပါဘူး ။
(src)="9.1"> Haresh Deol , el blogger que tiene Foul from Malaysia , discute sobre apuestas de deportes , que fue un tema importante en Malasia hace pocos meses .
(trg)="17.3"> နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ဒီကိစ္စကို သူတို့တွေဘယ်လောက်တည်ကြည်ပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းလဲဆိုတာကို ကြွေးကြော်ဖို့အကောင်းဆုံးခုတုံးအဖြစ်သုံးခဲ့ကြတယ်။
(src)="10.1"> Hablando de legalizar las apuestas en los deportes , muchos partidos lo objetan .
(trg)="17.4"> အစိုးရက ဒီအခြေအနေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်း ရှင်းပြသင့် တာ ။
(src)="10.2"> La apuestas no son saludables para todos – mayoría o minoría .
(trg)="18.4"> ဒါပေမဲ့ဒီဟာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းဂစ်တွေ ( စာကြွင်း ။
(src)="10.3"> Los políticos están usando este tema como una vía perfecta para alegar lo honrados y religiosos que son .
(trg)="18.6"> မလေးရှားငွေကြေး ) ရဲ့စီးဆင်းမှုကို စောင့် ကြည့် နိုင်မယ်ဆိုရင်၊
(src)="10.4"> El gobierno debería EXPLICAR adecuadamente la situación .
(src)="10.5"> No estoyafavor de las apuestas , al igual que no lo estoy de fumar .
(src)="10.6"> Si no es saludable , no es saludable .
(trg)="18.7"> ပြီးတော့အစိုးရအတွက်ဝင်ငွေရင်းမြင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မလုပ်နိုင်စရာ ဘာအကြောင်းရှိလဲ ။
(src)="10.7"> Pero si es un buen método para seguir de cerca el flujo de nuestro ringgit ( nota del autor : moneda de Malasia ) y una fuente de ingresos para el gobierno , ¿ por qué no ?
(trg)="20.3"> ဗီယက်နမ်ဘောလုံးမှ အဲရစ်ဘွေ့နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ်ရွန်တို့အား အရှေ့တောင်အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
(src)="1.1"> Asia del Sur : Bloggers discutieron problemas del agua
(src)="1.2"> El Blog Action Day es un evento anual que se celebra cada 15 de Octubre y que unealos bloggers del mundo en escribir acerca del mismo tema en un mismo día .
(trg)="2.1"> ဘလော့ဂ်လှုပ်ရှားမှုနေ့သည်အောက်တိုဘာ ​ လ ၁ ​ ၅ ​ ရက်​ ၌ အကြောင်းအရာ ​ တစ်​ ခု ​ တည်း ​ နှင့် ပတ်သက်​ သည်​ ကို တစ်​ နေ့​ တည်း ​ တွင်ရေးသား ​ လွှင့် ​ တင်​ ကြ ​ သော ကမ္ဘာ ​ ဘ ​ လော့ဂ်​ ရေး ​ သူ ​ များ ​ စုစည်း ​ ပြီး နှစ်စဉ်​ ကျင်းပ ​ သော အစီ ​ အစဉ်​ တစ်​ ခု ​ ဖြစ်​ သည်။
(src)="1.3"> Este año el tema de la acción fue el 'agua ' .
(src)="1.4"> Algunos de los bloggers de Asia del Sur participaron en este evento .
(src)="1.5"> Echemos un vistazoalo que algunos de ellos discutieron .
(src)="2.1"> Recipientes para agua en fila para llenar en Mamallapuram , India .
(src)="2.2"> Imagen del usuario en Flickr mckaysavage .
(trg)="2.4"> မည်​ သည့် ​ အကြောင်းအရာ ​ များ ​ အား ဆွေးနွေး ​ ပြောဆို ​ ခဲ့​ သည်​ ကို ကြည့် ⁠ ကြည့် ​ ကြ ​ ပါ ​ စို့။
(trg)="3.1"> အိန္ဒိယ ၊
(src)="2.4"> India :
(trg)="3.4"> အိန္ဒိယ
(src)="3.1"> El agua en India es una paradoja .
(trg)="4.1"> Wandering Mist မွ အစ်ရှ်ရတ်သ္ရေးခဲ့သည်​ မှာ ၊
(src)="3.2"> Siempre ha sido la bendición y la maldiciónalo largo y ancho de la nación .
(trg)="5.1"> အိန္ဒိယမှ ရေသည်သမ္မု ​ တိ ​ ဝိ ​ ရော ​ ဓိ ​ သဘော ​ ဖြစ်​ သည်။
(src)="3.3"> El norte de India daaluz al agua .
(trg)="5.2"> နိုင်ငံ ​ ၏ အကျယ်အဝန်း ​ အတွက်အစဉ်​ အမြဲ အကျိုး ​ နဲ့အပြစ်ဖြစ်လာ ​ ခဲ့​ သည်။
(src)="3.4"> El sur de India lucha por los ríos que fluyen .
(src)="3.5"> El noroeste de India es un desierto hambriento de agua .
(trg)="5.4"> တောင်​ အိန္ဒိယ ​ က စီး ​ ဆင်း ​ လာ ​ သော မြစ်​ များ ​ အတွက်တိုက်ခိုက်​ သည်။
(src)="3.6"> Y el este de India tiene la más alta precipitación que no ayuda en nada .
(src)="4.1"> Y por si fuera poco , los problemas de agua en India incluyen la contaminación , la insuficiencia , la negación , la corrupción , problemas de portabilidad , acceso , muertes y enfermedades , polución , crecimiento irresponsable de industrias que dependen del agua y mucho más Nos hemos olvidado de nuestros ingeniosos estilos de vida , donde cada recurso natural , como el agua , fue usado y no abusado .
(src)="4.2"> No había duchas interminables , tinas de agua caliente , fiestas de lluvia o enormes tanques de agua para asegurar que el agua se mantuviera corriendo durante las abluciones .
(src)="4.3"> El agua estaba racionada según el uso .
(trg)="6.3"> လက်သင့် ​ မ ​ ခံ ​ ခြင်း ၊
(src)="4.4"> No había conceptos de suministro de agua 24/7donde cada familia tenía que excavar en su pedazo de tierra .
(trg)="7.7"> အိမ်​ တိုင်း ​ က ရေရ ​ ရှိ ​ ရန်တွင်းတူး ​ ခဲ့​ ရ ​ ချိန်​ တွင်၂ ​ ၄ ​ နာရီ ၇ ​ ရက်ရေ ​ ပေး ​ ရ ​ မည်​ ဆို ​ သော အယူ ​ အဆ ​ များ ​ လည်း မ ​ ရှိ ​ ခဲ့​ ပါ ။
(src)="4.5"> Nosotros , con conocimiento , conciencia y responsabilidad , estamos continuamente convirtiendo la tierra en un infierno viviente .
(src)="4.6"> Aastha Kukreti en Delhi Greens proporciona 25 consejos para ahorrar agua .
(trg)="9.1"> ဒေလီစိမ်းလန်းရေးမှ အာစ်​ သ ကူ ​ က ​ ရီ ​ တီ ​ က ရေ ​ ကို ​ ထိန်းသိမ်း ​ သုံးစွဲ ​ ရန်နည်း ​ လမ်း ​ ၂ ​ ၅ ​ သွယ်​ ကို ပေးခဲ့ပါသည်။
(src)="4.7"> Abha Midha informa :
(trg)="9.2"> အဘ္ဟ မိ ​ ဒ ​ က သတင်းပေးရေးသားခဲ့သည်​ မှာ
(src)="4.8"> En India , el área de saneamiento en el Movimiento Sulabh ha traído consigo una revolución social .
(src)="4.10"> Punto de distribución de agua en Patan Nepal .
(src)="4.11"> Imagen del usuario de Flickr Wayan Vota .
(src)="4.12"> CC BY-NC
(trg)="9.6"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Wayana Vota ၏ ဓာတ်​ ပုံ ။
(src)="4.13"> Nepal :
(src)="4.14"> Bhumika Ghimire arroja una luz en el tema del agua en Nepal :
(src)="4.15"> La crisis del agua está directamente relacionada con el deterioro del ambiente en Nepal .
(src)="4.16"> En la capital , Katmandú , muchas zonas no tienen agua durante seis díasala semana y se ven obligadasacomprar aguaatravés de distribuidores o tienen que apoyarse en pozos y ríos locales -en los que la calidad del agua no se monitoriza .
(trg)="11.3"> ရေ ​ သန့် ရှင်း ​ မှု ​ ကို စောင့် ​ ကြည့် ​ စစ်ဆေး ​ ခြင်း ​ မ ​ ပြု ​ နိုင်​ သော ဒေသ ​ တွင်းရေ ​ တွင်း ​ များ ​ နှင့် မြစ်​ များ ​ ကို အား ​ ထား ​ ရန်​ ဖြစ်​ စေ ဖိ ​ အားပေး ​ ခံ ​ နေ ​ ရ ​ သည်။
(src)="4.17"> Ujjwal Acharya publica una imagen que muestra cómo el agua está asociada con nuestra vida cotidiana .
(trg)="13.1"> အုဂ်ျဝယ်အချာ ​ ယ ​ က ကျွန်ုပ်​ တို့​ ၏ ​ နေ့စဉ်​ ဘ၀ ​ နှင့် ရေ ​ ဆက်​ စပ်​ နေ ​ ပုံ ​ ကို ဖော်​ ပြ ​ သော ပုံတစ်ပုံကို တင်​ ခဲ့​ သည်။
(src)="4.18"> Pakistán :
(trg)="13.2"> ပါ ​ ကစ္စ ​ တန်၊
(src)="4.19"> Aunque Pakistán está sufriendo la peor inundación del último siglo , algunas de sus regiones están secas y sufren de desertificación .
(trg)="15.2"> ခူရှ်​ က ​ ဘ နှင့် ဆိုင်​ လ ​ ဘ ​ တို့​ ၏ စိုက်ပျိုး ​ ရေး ​ နည်း ​ လမ်း ​ နှစ်​ ခု ​ မှာ လမ်းလွှဲ ​ ခံ ​ လာ ​ ရ ​ သည်၊
(src)="4.20"> Khalida Brohi , una niña indígena de Beluchistán , Pakistán , acota que los indígenas son los primeros en ser los más afectados por el cambio climático :
(trg)="15.3"> ရေ ​ ကြီး ​ သည့် ​ ရေ ​ များ ​ ကို စိုက်ပျိုး ​ မြေ ​ များ ​ တွက်အသုံးပြု ​ ရန်နည်း ​ လမ်း ​ မှာ အလုပ်​ ဖြစ်​ ခြင်း ​ မ ​ ရှိ ​ ပေ ။
(src)="4.21"> Las tradicionales formas baluchis de subsistencia y uso de tierras agrícolas han ido cambiando pocoapoco .
(src)="4.22"> Los dos métodos de agricultura , Khushkaba y Sailaba , están desviados , la realización de bandas para utilizar el agua de la inundación de tierras no funciona porque las inundaciones han cambiado de rumbo , ya que ahora ni la sabiduría indígena puede predecir dónde estarían atacando las inundaciones , alguna vez una bendición de los valles en Beluchistán , las montañas son ahora un peligro de desastre para ellos .
(trg)="15.4"> အဘယ်​ ကြောင့် ​ ဆိုသော်ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ မှု ​ သည်လား ​ ရာ ​ ပြောင်း ​ သွား ​ ခဲ့​ ပြီး ယခု ​ အခါ ပညာ ​ ရှင်​ များ ​ ပင်​ လျှင်မည်​ သည့် ​ ဒေသ ​ သည်ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ ခံ ​ ရ ​ မည်​ ကို ခန့် ​ မှန်း ​ နိုင်​ ခြင်း မ ​ ရှိ ​ တော့​ ဘဲ ဘာ ​ လု ​ ချိ ​ စ ​ တန်​ တောင်​ ကြား ​ ရှိ ​ လူ ​ များ ​ အတွက်ကောင်း ​ ချီး ​ ဖြစ်​ ခဲ့​ ဖူး ​ သော တောင်တန်း ​ များ ​ သည်ယခု ​ အခါ သဘာ၀ ​ ဘေး ​ အန္တရာယ်​ ၏ အန္တရာယ်​ ဖြစ်​ နေ ​ တော့​ သည်။
(src)="4.23"> Pozo Marvi en el poblado de Malir del desierto Tharparkar en Sindh .
(src)="4.24"> Imagen del usuario de Flickr Kashif .
(src)="4.26"> Cuando llueve , el agua de lluvia es recolectada en pequeños tazones con forma de estanque llamados " tobas " , donde los hombres y los animales beben juntos .
(trg)="17.1"> Fire Within ရှိ ဂျ ​ လယ်အိတ်ခ်ျ ​ ဘီ က ဆင်းဒ်သ်​ ဒေသ ​ ရှိ သာ သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ ​ မှ သောက်ရေ ​ များ ​ ၏ မ ​ လုံလောက်​ မှု ​ ကို ရေးသားခဲ့သည်မှာ ၊
(src)="4.27"> No existen alternativas , ya que la excavación de pozos no es posible .
(trg)="18.2"> ရေတွင်း ​ တူး ​ ရန်မ ​ ဖြစ်​ နိုင်​ ၍ အခြား ​ နည်း ​ လမ်း ​ လည်း မ ​ ရှိ ​ ပေ ။
(src)="4.28"> Incluso , si hay éxito , el agua es tan salada y salobre que no puede ser consumida para beber .
(trg)="18.3"> တူး ​ ၍ ​ ရ ​ သည်​ ဆို ​ လျှင်​ ပင်ရေ ​ သည်အလွန်​ ငန်​ သော ဆား ​ ငန်​ ရေ ​ သာ ဖြစ်​ ၍ မ ​ သောက်​ သုံး ​ နိုင်​ ပေ ။
(src)="1.1"> Marruecos : estudiantes piden reforma de la enseñanza
(src)="1.2"> En julio un grupo de estudiantes marroquíes crearon una página de Facebook llamada " Unión de estudiantes marroquíes para el cambio del sistema educativo " ( en francés : UECSE ) .
(src)="1.3"> El grupo reune jóvenes marroquíes cuyo objetivo es " actuar y discutir soluciones concretas para mejorar el sistema educativo " .
(src)="2.1"> En menos de un mes la página de Facebook reunió mas de 10.000 miembros y muchísimo apoyo en los medios sociales .
(trg)="2.2"> ယင်းဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) စာမျက်နှာသည်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၁၀ ⁠ ၀၀၀ကျော်ကို စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်အားပေးထောက်ခံမှု အများအပြားကို ရရှိခဲ့သည်။
(src)="3.1"> El impulso parece haber sido dado por las noticias que el Gobierno estaría planificando endurecer la política de matrícula en las universidades públicas .
(src)="4.1"> El grupo llamóauna movilización nacional el pasado domingo6de agosto para " incitarala sociedad civil marroquíaabrir un debate nacional sobre las medidas para reformar el sistema . "
(trg)="4.1"> ထိုအဖွဲ့က " စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ်စတင်ရန်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် မော်ရိုကို အစိုးရလက်ရွေးစင်များကို အားပေးရန်" နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကို ဩဂုတ်လ ၆ရက်၊
(src)="5.1"> El llamado fue transmitido en los medios sociales .
(src)="6.1"> En un video que el movimiento subióaYouTube antes de la manifestación , los estudiantes pedían reformas radicales en el sistema educativo .
(src)="6.2"> " Todo el sistema educativo necesita ser cambiado " dice un estudiante frenteala cámara .
(src)="6.3"> " El sistema necesita ser cambiado totalmente y reconstruido desde cero " dice otro estudiante .
(src)="6.4"> Muchísimos estudiantes que aparecen en el video denuncian lo que consideran " medidas desmotivantes " impuestas por las prestigiosas " Grandes Ecoles " , en particular los altos niveles exigidos para competir en los exámenes de entradaalas universidades .
(trg)="6.5"> အထူးသဖြင့် ကောလိပ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအတွက်အလွန်မြင့် မားသော တံခါးခံနေမှု အစရှိသည်တို့ပါဝင်နေသည်ကို ထောက်ပြရှုံ့ချခဲ့ကြသည်။
(trg)="7.1"> ဆန္ဒပြသောနေ့တွင်အင်တာနက်တွင်ဝေမျှထားသော မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ ၊
(src)="7.1"> El día de la protesta cientos de estudiantes y sus padres estaban presentes como lo muestran las fotos y videos publicados y compartidos en Internet .
(trg)="8.3"> ညံ့ဖျင်းသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အဆင့် မြင့် ပညာရေးတက်ရောက်ရန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်ထားရှိသော ခက်ခဲသော အခြေအနေများကို ရှုံ့ချသည့် မတူကွဲပြားသော ဆောင်ပုဒ်များကို ပြသလျက်ရှိသည်။
(src)="9.1"> Los estudiantes marroquíes piden una reforma del sistema eductivo .
(trg)="9.1"> ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တောင်းဆိုနေသော မော်ရိုကိုကျောင်းသားများ ၊
(src)="9.2"> Foto de Hassan Ouazzani - uso autorizado
(trg)="9.2"> ဟာဆန်အောဇန်နီ ၏ ဓာတ်ပုံ ၊
(src)="10.1"> Los estudiantes marroquíes piden una reforma del sistema educativo .
(trg)="10.1"> ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တောင်းဆိုနေသော မော်ရိုကိုကျောင်းသားများ ၊
(src)="10.2"> Foto de Hassan Ouazzani - uso autorizado
(trg)="10.2"> ဟာဆန်အောဇန်နီ ၏ ဓာတ်ပုံ ၊
(src)="11.1"> Los estudiantes marroquíes piden una reforma del sistema tivo .
(trg)="11.1"> ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တောင်းဆိုနေသော မော်ရိုကိုကျောင်းသားများ ၊
(src)="11.2"> Foto de Hassan Ouazzani - uso autorizado
(trg)="11.2"> ဟာဆန်အောဇန်နီ ၏ ဓာတ်ပုံ ၊